Blackjack 🥇 Gali oo ka raaxayso Blackjack-online.app
Blackjack waa ciyaar lagu ciyaaro kaararka kaararka waxaana lagu ciyaari karaa 1 ilaa 8 sagxad oo 52 kaar ah, halkaas oo ujeedadu tahay in laga helo dhibco ka badan kan ka soo horjeeda, laakiin aan laga gudubin 21 (haddii aad lumiso). Ganacsaduhu wuxuu garaaci karaa oo keliya ugu badnaan kaararka 5 ama illaa 17.
Blackjack: sida loogu ciyaaro talaabo talaabo talaabo ah?
Si aad ugu ciyaarto Blackjack khadka tooska ah, waa inaad sameysaa raac tilmaamahan talaabo talaabo ah:
Tallaabada 1. Fur biraawsarkaaga aad doorbidayso oo aad tagto bogga ciyaarta Emulator.online.
Tallaabada 2. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad garaac ciyaarta waxaadna bilaabi kartaa ciyaar.
Tallaabada 4. Ugu soo dhawaaw 21.
Waa maxay blackjack?????
Blackjack waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan adduunka. Ciyaarta ayaa ah fudud, dareen leh qof walbana wuu ciyaari karaa. Blackjack waxaa lagu ciyaari karaa tiro dekedo ah oo u dhexeeya 1 illaa 8, oo leh 52 kaar oo midkiiba. Intaa waxaa dheer, waxaa jira ikhtiyaari ah in lagu ciyaaro blackjack online.
Ujeeddada ciyaarta waa fududahay: gaaro dhibcaha ugu sarreeya ee suurtagalka ah, iyada oo aan ka badnayn 21 dhibcood. Si loo gaaro hadafkan, ciyaaryahanka ayaa marka hore la siiyaa labo kaar, laakiin wuu codsan karaa wax intaa ka badan inta ciyaarta lagu jiro.
Dhibcaha ugu sarreeya ee suurtagalka ah waxaa loo yaqaan 'Blackjack', waana sababta ay ciyaartu u leedahay magacan cajiibka ah.
Blackjack, sidaan ognahay, waxay ka soo wareegtay ciyaaro kala duwan oo qarnigii XNUMX-aad lagu ciyaaray Yurub. Ciyaarahan badankood waxay lahaayeen hal shay: hadafku wuxuu ahaa in la gaaro 21.
Tixraacii ugu horreeyay ee cayaarahan waxaa lagu sameeyay 1601 wuxuuna kujiraa shaqada Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Riwaayaddani waxay ka warrameysaa nolosha iyo murugada laba xumaan oo Sevillian ah oo ka yimid xilligii Dahabiga, kuwaas oo aad ugu xeel dheer ciyaarista ciyaarta loo yaqaan "Ventiuno".
Nooca Faransiiska Ciyaarta 21 waxyar baa ka duwan, maadaama ganacsaduhu uu labalaabi karo sharadyada isla markaana ciyaartoydu ay sharad ku galaan wareegga kasta.
Marka la eego, nooca talyaaniga, oo leh magaca Toddobo iyo Badh, waxay ku raacsan tahay in ciyaarta lagu ciyaaro kaararka wejiga, iyo sidoo kale lambarrada 7, 8 iyo 9. Ciyaartu way ku kala duwanayd nooca Talyaaniga maxaa yeelay, sida magaca ka muuqata, ujeeddada waxay ahayd in la gaadho toddobo dhibcood iyo badh. Sida iska cad, hadii ciyaartooydu ka gudbaan toddobada iyo badhka calaamadda, way luminayaan.
A Ameerika waxay timid kacaankii Faransiiska kadib, oo markii hore ma ahayn mid caan ka ah meelaha khamaarka lagu ciyaaro. Si loo soo jiito ciyaartoy ciyaartan, milkiilayaashu waxay bixiyeen gunooyin kala duwan. Fursadaha ugu caansan waxay ku lug lahaayeen 10 ilaa 1 nidaamka lacag bixinta, ee gacanta oo leh caleemo jilicsan iyo blackjack. Gacantaas waxaa loo bixiyay Blackjack, iyadoo ciyaarta loo bixiyay magaceeda.
Blackjack waa ciyaar uu leeyahay doorsoomayaal badan oo ka mid ah casinos laftiisa. Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa kala duwanaanshaha ugu badan ee la isticmaalay:
Waa kala duwanaansho aad ugu eg asalka, waxaa si caadi ah loogu ciyaaraa 6 ilaa 8 sagxad oo kaararka 48 ah.
Si kastaba ha noqotee, halkan Waa suurtagal in la laba jibaaro tiro kasta oo kaararka ah, sida ay suurtagal u tahay in lagu dhufto hal kaar oo dheeraad ah ka dib marka laga saaro aces.
Isbaanishka 21, ciyaaryahanka Blackjack marwalba wuu garaacaa ganacsadaha.
Multi-hand Blackjack waxaa loogu ciyaaraa si isku mid ah sida caadiga ah ee loo yaqaan 'Blackjack Blackjack' oo badanaa waxay ka muuqataa casinos-ka khadka tooska ah maadaama ay u oggolaaneyso ciyaaryahanka inuu haysto ilaa 5 gacmood oo kaladuwan inta lagu jiro isla ciyaarta.
Kala duwanaanshahan waxaa lagu ciyaarayaa 5 sagxad isku mar.
Noocani waa lagu ciyaarayaa 52 kaar oo had iyo jeer weydiisan kartaa inaad isku laabto ciyaartaada 9 ama Ace. Si kastaba ha noqotee, qaabkan haddii ganacsaduhu leeyahay Blackjack, wuxuu lumiyaa sharadkiisa oo dhan.
Beddelka Blackjack wuxuu ku siinayaa xoogaa dhaqdhaqaaqyo ah oo guud ahaan lagu sifeyn lahaa inay yihiin khiyaamo ciyaar kaararka caadiga ah.
Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshahan lagu sameeyay 6 ilaa 8 sagxad, ciyaartoydu had iyo jeer waxay leeyihiin laba gacmood oo kala duwan, kaararka si waji furan ayaa loo wajahaa, ciyaartoyduna way isweydaarsan karaan kaararka gacmaha.
Dhismaha Las Vegas
Vegas Strip waa kala duwanaansho kale oo loo yaqaan 'Blackjack' waxaana lagu ciyaaraa 4 sagxad ah 52 kaararka. Halkan ganacsadaha waxaa waajib ku ah inuu joojiyo inta wadarta kaararka uu ka yahay 17.
Sidoo kale, ciyaaryahan ayaa ka saari kara labada kaar ee hore isla markaana dib u wareejin kara gacmihiisa.
Hadda waxaan ognahay waxa uu yahay blackjack iyo fikradaha aasaasiga ah, laakiin ka hor intaadan ku ciyaarin blackjack khamaarka dhulka ama internetka, waa inaad barataa oo aad si fiican u barataa xeerarka blackjack. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad dareento raaxo badan inta lagu guda jiro khibradaada ugu horreysa ee ciyaarta iyo in cayaartu ay si dhakhso leh ugu muuqato dhammaan ciyaartoyda miiskaaga joogta.
BlackJack waa ciyaar istiraatiijiyad ah, oo lagu ciyaaro miiska wadajirka ah ee dhowr ciyaartoy ay ku ciyaari karaan, laakiin mid waliba wuxuu kuxiranyahay istiraatiijiyaddiisa wuxuuna si gooni ah ula ciyaaraa Ganacsadaha.
Ujeedada ciyaartoy kasta waa inay sameyso 21 ama ay gacanta u dhigto sida ugu dhow ee 21. Ciyaaryahanka ama ganacsadaha wuxuu sameeyaa BlackJack marka labadooda kaar ee bilowga ay yihiin Ace iyo 10 (Ace + 10 card, ama Ace plus card).
Ciyaar bilow ????
BlackJack waxaa guud ahaan lagu ciyaaraa 6 sagxad oo kaararka ah isla mar ahaantaana lagu kala qasan yahay ciyaar kasta.
In wareegii koowaad Kaararka la siiyay ciyaartoyda waxaa loola jeedaa wajiga, marka laga reebo kaarka koowaad ee ganacsadaha oo si fool ka fool ah loola macaamilo.
Marka kaarka labaad ee ciyaarta la dhaqmayo, kaararka oo dhan waa la wajahayaa waana qiimaha kaarka ganacsadaha oo saameyn ku yeelan doona dhammaan go'aannada ay ciyaartoydu ka gaari doonaan ciyaarta.
Qiimaha kaararka ganacsaduhu waa inuu had iyo jeer ahaadaa kor ku xusan 17Si kale haddii loo dhigo, haddii ganacsadaha labadiisa kaar ee ugu horreeya ay ka qiimo yar yihiin 17, waa inuu sawiro kaarar badan illaa uu ka gaarayo ugu yaraan 17 iyo ugu badnaan 21.
Haddii ganacsaduhu sameeyo wax ka badan 21, wuu hubiyaa, dhammaan ciyaartoyduna way guuleystaan. Haddii ay dhacdo in ganacsadaha uu qiimeeyo inta u dhexeysa 17 iyo 21, ciyaartoyda leh qiime ka sarreeya ayaa ku guuleysta, waxay ku xiraan ciyaartoy isku qiimo ah ciyaartooyda oo leh qiime ka hooseeya kan ganacsadaha ah ayaa luminaya qamaarkooda.
BlakJack wuxuu bixiyaa 2 ilaa 1, laakiin hadii ciyaaryahan uu BlackJack sameeyo waxay guuleysanayaan 3 ilaa 2. Haddii Ganacsadaha BlackJacks, uu ku guuleysto dhammaan gacmaha miiska, xitaa kuwa leh qiime 21. Marka ciyaaryahanka iyo Ganacsade BlackJack, loo tixgeliyo isku xirnaan mana jirto wax lacag bixin ah.
Waxaad guud ahaan ka heli doontaa macluumaad ku saabsan miis kasta oo blackjack ah oo tilmaamaya xadka ugu yar iyo kan ugu sarreeya ee miiskaas. Haddii xadka miiska uu tilmaamayo € 2 - € 100, tani waxay ka dhigan tahay in sharadka ugu yar uu yahay and 2 halka sharadka ugu badan uu yahay is 100.
Qiimaha kaarka Blackjack
Kaadh kasta oo lambarkiisu yahay 2 illaa 10 wuxuu leeyahay qiimihiisa wajiga (u dhigma lambarka kaarka).
Jacks, boqorada iyo boqorrada (jaantusyada) waxay u qalmaan 10 dhibcood.
Ace wuxuu u qalmaa 1 dhibic ama 11 dhibcood, doorashada ciyaaryahanka iyadoo kuxiran gacantiisa iyo qiimaha isaga ugu fiican. Markaad ku ciyaareyso BlackJack khadka tooska ah, softiweerku wuxuu qiyaasayaa qiimaha Ace kaas oo faa'iido u leh ciyaaryahanka.
Iyadoo aan loo eegin kala duwanaanta ciyaartan, noocyada dhaqdhaqaaqa waa isku mid dhammaantood.
Dhaqaaqa Blackjack Blackjack
hay 5 nooc dhaqdhaqaaqyo kala duwan.
istaag (Jooji) Sida magaca ka muuqata, ciyaaryahanka ayaa ku qanacsan gacantiisa mana doonayo inuu helo kaarar kale.
Garaac: dhacdaa marka ciyaaryahanka uu doonayo inuu helo kaar kale.
Labo jeer: Haddii ciyaaryahanka uu dareemo inuu kaliya u baahan yahay hal kaar oo dheeri ah (hal kaliya), wuxuu codsan karaa in sharadkiisa la labanlaabo oo uu helo hal kaar oo dheeri ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in doorashadan lagu bixin karo oo keliya labada kaar ee ugu horreeya ee aad hesho.
Qaybi: Haddii labada kaar ee ugu horeeya ee uu helay ciyaaryahanka ay isku qiimo yihiin, wuxuu dooran karaa inuu u kala qaybiyo laba gacmood oo kala duwan. Xaaladdan oo kale, kaar kasta wuxuu noqon doonaa kaarka koowaad ee gacan cusub. Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waa lagama maarmaan in la dhigo sharad cusub (oo u dhigma qiimaha kan hore) gacantaan cusub.
Is dhiib: Waxaa jira casinos qaar ka mid ah oo u oggolaanaya ciyaaryahanka inuu isku laabmo ka dib markii uu helo labada kaar ee hore. Si kastaba ha noqotee, kiiskan waxaad had iyo jeer lumineysaa 50% qadarka aad markii hore ku sharraxday.